ATN: November 2009
မင့်ဆိပ်ကမ်းကို မတော်တဆ ရောက်လာခဲ့တဲ့
ကယ်လီဖိုးနီးယားကို မနက်ဖန် ခဏ
မြူတွေ ကြားထဲမှာ ချမ်းနေတဲ့
လေးတွဲ့တွဲ့ သင်္ဘောကြီးတွေကို ကြည့်မိတိုင်း
သူတို့တွေ လာတုန်းကလည်း တစီးထဲ…
ငါ့ခြေလှမ်များး ချမိတုန်းက ငါ တယောက်ထဲ…
ဘယ်လို ၀န်တွေကိုများ သယ်ဆောင်ပြီး
အမှောင်ထဲ ကျွံကျနေခဲ့သော နေ့ရက်များ...
ငါ့ ခရီးအဆုံး တဖက်ကမ်းကို
ဘယ်နေ့ ငါ ရောက်သွားမယ်
ကဏ္ဍများ အက်စ်တိုးရီးယားနှင့် စကားပြောခြင်း
ခုတလော သူ့မှာ အလုပ်တွေ ရှုပ်လွန်းလို့ အချိန် အတော် ဆင်းရဲ နေသည်။ အရင်က နေ့စဉ် သွားလည် ဖတ်နေနေကြ ဘလော့တွေကိုပင် သိပ် မရောက်ဖြစ်တော့သည်မှာလည်း အတော် ကြာနေပေပြီ။ Google Reader နဲ့ သူ Feed ယူထားလို့သာ ဘလော်ဂါ ညီအကို မောင်နှမများ၏ ပို့စ်အသစ်များကို ဖတ်ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ပေသည့် တချို့ ပို့စ်များဆိုလျှင် ကွန်မန့် ပေးချင်သည်ဆိုလျှင်တောင် အချိန်မရှိလို့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေရသေးသည်။ (ဥပမာ- အကိုကြီးနိုင်ဖေရဲ့ လက်စောင်းထက်လှသော ရွှေရတု ပို့စ်များဆို မသိသလိုလို သူနေနေရသည်… ခွင့်လွှတ်ပါ အကိုကြီး….း)
သူ ဘလော့ စရေးစဉ်ကတော့ ဘလော့တကာ လျှောက်လျှောက်သွား၊ ဆီပုံးတကာမှာ နှုတ်ဆက်၊ ဂျီမေးလ်တွေ လိုက်လိုက် အက်ဒ်၊ ပို့စ်တွေမှာ မှတ်ချက်တွေ ရေး။ ဂျီတော့မှာ ချက်တင်းတွေ ပေးနဲ့ တနေ့နေ့ ၄- ၅ နာရီလောက်တော့ အလုပ် ရှုပ်သည်။ ကိုယ့်ဘလော့ကို လာလည်သူ မှန်သမျှ၏ ဘလော့တွေကိုလည်း တယောက် မကျန် လိုက်ပြန်လည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်၊ ဆီပုံးထဲမှာလည်း ဧည့်ထောက်ခံကာ တယောက်ချင်းကို ပြန်နှုတ်ဆက်၊ ကွန်မန့်တွေ တက်လာသမျှကိုလည်း ပြန်ပြန် ပြောရသေးသည်။ သည်လိုနဲ့ ဘလော့ယဉ်ကျေးမှု မြစ်ရေစီးထဲမှာ အားရပါးရကြီး လက်ပစ်ကူးခဲ့လေသည်ပေါ့။
ခုတော့ ကိုယ့်ဘလော့ကိုတောင် ကိုယ်ပြန် မဖတ်နိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။ ပို့စ်အသစ်တခု တင်စရာရှိသည့် အခါမှ ပြောက်ကျားပစ်ပြေးသလို ပို့စ်အသစ်ကို ကမန်းကတမ်း ပတ်ဘလစ်ရှ် လုပ်ပေးပြီး ပြန်ပြေးရသည်က များနေသည်။ ကွန်မန့်တွေကို မပြန်ဖြစ်သည်မှာလည်း လနဲ့ချီခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို ညီအကို မောင်နှမများ၏ ဆီပုံးထဲမှ ပဋိသန္ဓာရစကားတွေကိုလည်း ပြန်မပြောကြားနိုင် ဖြစ်နေသည်မှာ အတော် ကြာပေပြီ။ (လာရောက်လည်ပတ်ကြသမျှသော ညီအကို မောင်နှမများ အားလုံးကို သည်နေရာကပဲ တောင်းပန်လိုက်ပါသည်၊ ဧည့်ဝတ်မကျေပွန်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေခဲ့ခြင်းအား နားလည် ခွင့်လွှတ် ပေးသွားကြပါရန်)
အွန်လိုင်းကလည်း အီးမေးလ်ဖွင့်ရုံလောက်သာပဲ တက်ကြည့် ဖြစ်သည်။ မျက်နှာစာအုပ်ကြီးထဲတောင် မရောက်တော့သလောက် ဖြစ်သွားသည်။ တချို့ ညီအကို မောင်နှမတွေကတော့ သူ့ မျက်နှာစာအုပ်ရဲ့ နံရံကြီးမှာ စာတွေ လာလာရေးသွားကြသည်။ ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ-ပေါ့။ ခါတိုင်းလို ဂျီတော့မှာ ပွားကြလေ့ရှိသော ညီအကို မောင်နှမများနဲ့ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်မှာလည်း အတော်ကြာနေလေပြီ။ သည်အခါ တချို့ ညီအကို မောင်နှမတွေကလည်း စိုးရိမ်ကြပြီး အီးမေးလ်တွေ ပို့လာကြသည်။ ညီငယ်ဖုန်းမြင့်ဆို တွေ့ရာလူတိုင်းအား လိုက်မေးနေသည် ကြားရသည်။ (သူ့အား သတိတရ ရှိကြသော ညီအကို မောင်နှမများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်) စာတွေလည်း သူ သိပ်မရေးနိုင်သည်မှာ အတော်ကြာပြီ။ ရေးချင်စရာများ ခေါင်းထဲ ရောက်ရောက်လာသော်လည်း စာတပုဒ် ဖြစ်လာဖို့ မစဉ်းစားနိုင်အား။ သူ့မှာ ပူပင်စရာတွေ များနေခြင်းကလည်း အကြောင်း တရပ်ဖြစ်မည်လေ။ သည်လိုနဲ့ စာတွေ ဆက် မရေးဖြစ်တော့ သူ့ရဲ့ (၁)-(၂) တွေနဲ့ အဆုံး မသပ်ရသေးသော ပို့စ်တွေသည်ပင် မနဲပေ။ ညီမငယ် မကေကပင် တစ်-လစ် -တွေလို့ သူ့ကို နောက်နေချေသေးသည်။ အတွေးထဲ ရောက်ရောက်လာလို့ ကောက်ကာငင်ကာ ဖမ်းဆုပ်ယူထားမိသဖြင့်သာ ကဗျာ တချို့ကို ပို့စ်လုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စာပေချစ်ကြသော ညီအကိုမောင်နှမများအတွက် ဖတ်စရာ ကဗျာလေးတချို့ ရေးလို့ဖြစ်နေသေးသည်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်နေမိသေးသည်။
ခုဆို ရှေ့လ ဒီဇင်ဘာ (၆) ရက် ရောက်လျှင် သူ့ ဘလော့ရေးသက် (၂) နှစ်ပြည့် ဖြစ်မည်။ (၂) နှစ်ပြည့်အတွက် ပို့စ်တခုလောက် ရေးမည်လား စဉ်းစားမိသွားသေးသော်လည်း မိသားစု အရေးအတွက် ကယ်လီဖိုးနီးယားကို သူပြန်သွားရဦးမည်။ မိုင်ထောင်ချီသော ခရီးကို ကားမောင်းပြီး တရက်နေ့မှာ သွားရဦးမည်။ (၂) နှစ်ပြည့်အတွက် မစဉ်းစားအား။ သည်ပို့စ်ကို ဘလော့ရေးသက် (၂)နှစ်ပြည့် အကြိုအဖြစ် သူ ရေးထားပစ်ခဲ့ပါသည်။
သူ့ ဘလော့ကို လာရောက်ဖတ်ရှုအားပေးကြသော ဘလော့ဖတ် ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ (အထူးသဖြင့် - နေ့စဉ်မပျက်မကွက် လာလာဖတ်တတ်သော မီးငယ်၊ ရယ်စရာများကို ရေးရေးသွားတတ်သော မယ်ဆင်၊ ဆီပုံးထဲတွင် ဧည့်ဝတ်မကျေတဲ့ အိမ်ရှင်-ဟု ၀င်ဝင်အော်သွားတတ်သော ရည်မွန်) ဘလော့ကို လာရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် ဆီပုံးထဲတွင် ၀င်ရောက် နှုတ်ဆက်သွားတတ်ကြသော၊ ကွန်မန့်များကို ရက်ရက်ရောရော ပေးသွားတတ်ကြသော ဘလော်ဂါ ညီအကို မောင်နှမများအားလုံးကို သူ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ (ဘလော်ဂါ စာရင်းကိုတော့ သူ မလုပ်တော့ပါ၊ တစုံတယောက်သာ ကျန်နေခဲ့လျှင် မျက်နှာပျက်ချင်စရာ ဖြစ်မည်လေ….း) ထို့အတူ ဘလော့ကို လာရောက် လည်ပတ် ဖတ်ရှုသွားသော်လည်း ဆီပုံးထဲတွင် ၀င်ရောက် နှုတ်မဆက်ပဲ တိတ်တိတ်လေး ပြန်သွားရက်ကြသော၊ ကွန်မန့်များ မပေးပဲ ပြန်လစ်ပြေးသွားကြသော ဘလော်ဂါ ညီအကို မောင်နှမများ အားလုံးကိုလည်း သူ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဘလော့ကို လာရောက် မလည်ပတ်သော်လည်း ဂူးဂဲရီဒါမှ ဖိဒ်ယူကာ သူ့လိုပင် ဖတ်ရှုနေကြသော ဘလော်ဂါ ညီအကို မောင်နှမများကိုလည်း သူ အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် သူ့ မိုးပြိုကျနေခဲ့သော အချိန်ကာလများတွင် သူ ဆက်လက် ဘလော့ ရေးနိုင်နေအောင် သူ့အနားမှာ စိတ်အား ရုပ်အားဖြင့် အားပေးကူညီ ရပ်တည် ပေးခဲ့ကြသော ချစ်ခင်ရသည့် ဘလော်ဂါ ကဗျာ ညီအကိုမောင်နှမများ ဖြစ်သည့် အကိုကြီး ခင်အောင်အေး၊ ညီငယ် သစ်ကောင်းအိမ်၊ ညီငယ် မောင်ဖုန်းမြင့်၊ ညီငယ် ဆောင်းယွန်းလ၊ ညီငယ် ဥယာဉ်မှူး၊ ဆရာမ မေငြိမ်း၊ ညီမငယ် မနော်ဟရီ၊ ညီမငယ် အိန္ဒြာ၊ ညီမငယ် ပန်ဒိုရာ တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ချစ်ခင်ရသည့် ဘလော်ဂါ ညီအကို မောင်နှမများဖြစ်သော အကိုကြီး ကျောက်ခဲကြီး ရွှေရတု၊ ရဲဘော်ရဲဘက် သူငယ်ချင်း ဒေါင်းဂွင်၊ ရဲဘော်ရဲဘက် သူငယ်ချင်း ဦးဂင်ကြီး၊ ညီငယ် ကိုလူထွေး၊ ညီမငယ် ကျောက်ခဲအလတ် မိုးချိုသင်း၊ ညီမငယ် ကျောက်ခဲကလေး မကေ၊ ညီမငယ် မအယ်၊ ညီမငယ် မယ်ကိ၊ ညီမငယ် မငယ်နိုင်၊ ညီမငယ် မသီတာ တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဘလော့ဖတ်သူ ရဲဘော်ရဲဘက် သူငယ်ချင်း ကိုပိန်၊ ညီငယ် လုံးလေး (နယူးယောက်)၊ ညီမငယ် ဆင်ဒန်လား နှင့် အမည် မဖော်ပြစေလိုသော ညီမငယ် တဦးတို့အားလည်းကောင်း သူ့ အနေဖြင့် အထူး ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း သူ့ဘလော့ (၂) နှစ်ပြည့် အကြိုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရင်း ဘလော့ဖတ်သူများအားလုံး ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေကြပါစေရန် သူ ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
at 6:41 PM 19 comments:
ဆက်ပြီးတော့ ဖတ်ချင်နေပါတယ် ဆိုတဲ့
ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေ အတွက်
ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးအတွက် အလှတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့
ငါ့ရဲ့ဘ၀ သေးသေး သိမ်သိမ်
အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ တွေးတွေးနေမိ…
အသစ်စက်စက် အစိမ်းရောင် ထင်းရူးရွက်များ…
ရိန်းဒီးယားတွေ ဆွဲသွားပေးနေတဲ့ စွတ်ဖား...
မင့်ကို သယ်ဆောင် သွားလေမလား…
မင့် တောင်ကုန်း လှလှလေးတွေကို
မြူတွေနဲ့ ဖုံးဖုံး ချပြီး
ငါ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နေ့လေ…
မြူတွေနဲ့သာ မှိုင်းမှိုင်း မှုန်မှုန်..
ငါ့ ရင်တွေ ခုန်ပါတယ်…
မင်းဟာ မြူမှုန် နတ်သမီး…
အပြီးအပိုင်ပါပဲ မင်းကို ချစ်သွားမိခဲ့…
ဘယ်လောက်ပဲ မဲနက်နေတဲ့ ညဖြစ်ဖြစ်
အချိန်ကာလတွေနဲ့ပဲ ထုဆစ်ရတာ မဟုတ်လား…
နေ့၊ လ၊ နှစ်တွေရဲ့
အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ အမှား အယွင်းနဲ့…
မကြိုဆို မလိုလားအပ်တဲ့ ကျိန်စာ…
အလိုမတူပဲ တွန့်လိမ်သွားရရှာတဲ့ နာရီတလုံးပေါ်မှာ…
အရာရာ လွဲချော်နေခဲ့တဲ့ မြစ်တစင်း
ရုတ်တရက်ကြီး လမ်းကြောင်းပြောင်း စီးဆင်းသွား…
တမင်သက်သက် တိုက်စားခံရရှာတဲ့ ကမ်းများ…
လမဲ့ ညတွေကိုပဲ ကြိုးစားမေ့နေမိ…
အဆုံး အစ မရှိခဲ့တဲ့ နေ့တွေကိုပဲ လိုက်လိုက်ရှာကြည့်…
အတိတ်မေ့နေသည့် ရာသီဥတု တခုလေလား...
င့ါ နှလုံးသားထဲ ကောက်ထည့်ပစ်မိတဲ့
ငါ့ရဲ့ ကောက်ကွေးနေခဲ့တဲ့ မြစ်တစင်းကိ်ုတော့
ငါ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ဖြောင့်တန်းစေဖို့ ကြိုးစားခဲ့…
ထာဝရ ကောက်ကွေး တွန့်လိမ်နေမယ့်
ဘယ်လိုများ အလွဲလွဲ အချော်ချော်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့
ရုတ်တရက် စီးဆင်း ရပါ့မလဲ…
လူတကာရဲ့ ဂရုဏာတွေ ရရဲ့…
ငါက ကမ်းပြိုနေတဲ့ကောင် မဟုတ်ရဘူး…
မင့်ရင်ဘတ်ထဲ ငါ ပြန်လာနေပါပြီ…
လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ မင့်ရဲ့ လမ်းများက
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းဟာ ချစ်စရာကောင်းတယ်…
အေးစက်တဲ့ မင့် ညနေခင်းတွေကို
ငါက ရင်နဲ့ရင်းပြီး ထွေးပွေ့ခဲ့ပါတယ်…
ရှိရှိသမျှ အင်္ကျီအထပ်ထပ်နဲ့
ငါ့ဘာသာငါ ပြန်ပြီး ရစ်ပတ်ရသပေါ့လေ…
ငါ့မှာ အများကြီး ရှိနေခဲ့…
ငါက နှလုံးသားကို သုံးတယ်…
မင်းက ဘယ်လိုဘာသာကို သုံးမယ် ငါမသိ…
မင်း သုံးချင်ရာကို သုံးပါ့…
မင့် ရင်ဘတ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကဗျာဆရာဟာ
မင်းနဲ့ငါ တခုတည်း မရှိတော့ဘူး ဆိုတာ
ငါတို့ နှလုံးသားချင်း ရင်းနှီးနေကြတဲ့အခါ
မင်း ငါ့ကို နားလည်မှာပါ…
ဒါကို ငါက ယုံကြည်နေခဲ့ပြီးသား…
ငါကလည်း မင့် စာမျက်နှာတွေကို ဖတ်မယ်…
ငါတို့ နှစ်ယောက်က အလွမ်း ပြဇာတ်တခုလိုလို…
နေ့တာတွေတိုစေသော မင့်ရဲ့ မနက်ခင်းတွေကို
ငါ တက်နင်း မသွားလေဘူး…
အမြဲတမ်းပဲ မိုးတွေ စွေစွေနေပြန်တော့
အေးစက်မှုများကို သယ်သယ်လာတဲ့ လေပြင်းပြင်းကြီးတွေ
မင်းရဲ့ လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ လမ်းများပေါ်
ငါကတော့ ငါ့ဂျာကင်အင်္ကျီကို ဇစ်ဆွဲစေ့ရင်း
မင်းရဲ့ လမ်းတလမ်းကို နင်းလိုက်တယ်…
ဂျာကင်အင်္ကျီကို ခြုံလိုက်တဲ့အခါ
ဘယ်လို အင်္ကျီကိုများ
စောင် ခြုံရင် မလုံ
အချစ် ခြုံမှ လုံ-သတဲ့…
ငါ့ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ “နှင်း”…
သူ့ အချစ်တွေကို ငါခြုံမှ
ငါ့ရဲ့ “နှင်း”ကို တမ်းတမိ…
ခုချိန်ဆို သူ ဘယ်လို ရှိနေမလဲ
ငါ့ နှလုံးသားတွေ နာကျင်…
ငါ ငိုချင်တယ်… အက်စ်တိုးရီးယားရေ့…
အလွမ်းသမား-လို့ ငါ့ကို မပြောနဲ့
အဖေ့ကို လွမ်းရင်း အမေက ငါ့ကို မွေးထားခဲ့တာ…
အလွမ်းဟာ ငါ မမွေးခင်ကတည်းက
ငါ့ အလွမ်းတွေကို နှိုးထနေတာပေါ့ကွယ့်…
မင်းရဲ့ မှောင်မဲ မှုန်ရီ အေးစက် စိုစွတ်နေတဲ့ မနက်ခင်းမှာ
လူ့ဘ၀အတွင်းမှာ မရှိတော့တဲ့ အမေ့ကို လွမ်းတယ်…
ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့တဲ့ အဖေ့ကို လွမ်းတယ်…
ငါ့ရဲ့ အကိုကြီးကို လွမ်းတယ်…
ငါ့ရဲ့ ညီမလေးကို လွမ်းတယ်…
နွေရာသီမှာ စမ်းချောင်းကလေး ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့
ငါ့ရဲ့ ရွာလယ်လမ်းကလေးကို လွမ်းတယ်…
အပူအပင်တွေ လုံးဝ မသမ်းဖူးသေးတဲ့
ငါ့ရဲ့ ကလေးဘ၀လေးကို လွမ်းတယ်…
အနီးဆုံး ဖြစ်ပေမယ့်… ကမ္ဘာတခြမ်းစာ
အလှမ်းဝေးနေရရှာတဲ့ ချစ်သူကိုလည်း လွမ်းတယ်…
ငါ့ကို စိတ်ရှည် လက်ရှည်နဲ့
မင်းနဲ့ တခေါက် ထပ်တွေ့မယ်လေ…
မင့်ရဲ့ အေးစက်စက် ညနေစောင်းများက
ငါ့ ခံနိုင်ရည်တွေကို စမ်းသပ်နေခြင်းပေလား…
တံငါသည် တယောက် မဟုတ်ဘူးကွယ့်…
နေ့လည် ၂ နာရီဟာ ညနေ ၆ နာရီလို
ငါ ဘယ်လို နားလည်နိုင်မလဲ…
ငါဟာ ငါး မမျှားတတ်သလို
ငါက အလွမ်းတွေကို အစာလုပ်ထားပြီး
ခပ်ပုပုနဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး ငတိဟာ
“ခံစားမှုတွေကိုချည့် လိုက်လိုက်မျှားနေတဲ့ တံငါပေါ့”လို့
မင်း ပြောချင်ရင်လည်း ပြောခဲ့ပေါ့…
မင့်ရဲ့ မျက်နှာနီနီနဲ့ ပင်လယ်တံငါသည်ကြီးတွေက
သူတို့နဲ့ ရုပ်ချင်း ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေသလို
နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေ မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေ ထူလဗြစ်နဲ့
အူ ဟောင်းလောင်းတွေကို အစာ အပြည့်ဖြည့်ပေးဖို့
သူတို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ငါးဖမ်းနေကြတာ
မိုး၊ နှင်း၊ ရေခဲနဲ့ အေးစက်တဲ့ လှိုင်းတွေကြားထဲက
ငါ့ စိတ်ကူးနဲ့ ငါ ဖမ်းယူ ဆုပ်ကိုင်ကြည့်နေမိသေးတယ်…
ဒါကို ငါသိနေတာပေါ့… အက်စ်တိုးရီးယားရဲ့…
သီချင်း တပုဒ်ကိုတောင် ငါ သတိရမိသွားသေးတယ်…
သူတို့အတွက် ငါ ဆိုခဲ့ချင်သေးတယ်…
နှစ် ၂၀၀ ပြည့်တော့မယ့် မြို့အိုလေးငဲ့…
မင့်အတွက်လည်း ငါတေးသီပါဦးမယ်… အက်စ်တိုးရီးယားရဲ့…
အေးအေးစက်စက်နဲ့ မဲမှောင် ရီဝေလှချည့်…
ငါ့စိတ်ထဲက အလိုလို မုန်းတယ်…
ဟိုး မြောက်ပိုင်း ရေခဲ ပြည်နယ်များက
မင့်ရဲ့ ဦးခေါင်းထက်က လေစီးကြောင်း
ငါတို့ အဖော် အပေါင်း မလုပ်ရင်
မင်း ဘယ့်နှယ် သဘောရသလဲ…
ငါ့ခေါင်းပေါ် နှင်းမိုးတွေ ရွာရွာချတာ…
ငါ့မှာ နောက်တခါ စိုစွတ်ရသေး…
အစွမ်းကုန် ငါ ပြုံးပြနေသေးတာ
မင်းက ငါ့ကို ထမ်း
ငါက ငါ့ဘ၀ကြီးကို ထမ်း
“သန်းနိုင်”ရဲ့ “လမ်းဆက်လျှောက်မယ်” သီချင်းကို ငါကဆို…
“ငါ့ကို မုန်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ သိချင်စမ်း”
မင်းကတော့ ငါ့ကို နားမလည်နိုင်သလို ကြည့်နေခဲ့…
ဒါကိုပဲ မောင်ရင် သိမှ
မင့်ကို ငါ ချစ်ပါတယ်… …
မိုးတွေ စွေနေအောင် ရွာချတဲ့ တနေ့မှာ
မင့်ရဲ့ ကိုလံဘီယာ မြစ်ကမ်းနံဘေးနားမှာ
အလွမ်းတေးများ ငါ မဆိုချင်ပါဘူး…
ချစ်ခြင်းနဲ့ ရူးသွပ်နေသူ တယောက်ရဲ့ နှလုံးသားဟာ
အချစ်သီချင်းတွေပဲ ငါ သီကျူးချင်…
လူ အိုအိုတွေ… အိမ် အိုအိုတွေ…
ကား အိုအိုတွေနဲ့… မြို့အိုအိုကလေးက…
ငါ့ သောက အိုအို ဟောင်းဟောင်းကြီးတွေကို
အလိုအလျောက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အနွေးနွေး အထွေးထွေး…
ငါဟာ ပြန်လည် ပျိုမြစ်
မထစတမ်း ငိုက်မြည်းနေတဲ့ သင်္ဘော အိုအိုကြီးတွေက
ငါ့အတွက် ၀ိုင်နဲ့ ရောယှက်စရာ အမြည်းတွေ…
ရေခဲရေလို အေးမြ ပြစ်ခဲနေတဲ့ မြစ်ထဲမှာ
ငါ အသည်းကွဲခဲ့တာကို မသိတဲ့ ပင်လယ်ဖျံတွေ…
ခွေးတွေ ဟောင်သလို ဟောင်နေတဲ့
အဲဒါကိုပဲ ငါက ရယ်ပွဲဖွဲ့နေခဲ့သေးတယ်…
ငါ့ အမည်ကို မသိတဲ့ ပင်လယ်ဖျံ တကောင်ကို
“အောင်သာငယ်”လို့ ငါ အမည် ပေးခဲ့တယ်…
ငါအသည်းကွဲခဲ့တာ … ဒင်း… မသိဘူးလေ…
မင်း အခု ချစ်မှာလား…
ငါကတော့ မင့်ကို ရင်ဘတ်ထဲ ပစ်ထည့်ခဲ့မိပြီ…
ခုညတော့ အလင်းတွေမဲ့ ခဲ့ပြီ...
မနက်ဖန်မှ… မင်းနဲ့ငါ …
အတိတ်မှန်ကို ကြည့်မိတဲ့ အခါမတော့
ပင်လယ်ကို ရှာမတွေ့ခဲ့သူ တယောက်အကြောင်း
ဆယ့်နှစ်ကြိုး ထုံထားအောင် တီထွင်ပြီးခဲ့တဲ့ ဗျပ်စောင်းကို
တကယ့်အမျိုး စုံသွားအောင် စီရင်တီးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကြောင်းနဲ့
ဘ၀ညရဲ့ ပြိုပျက်နေတဲ့ လမ်းများ အစုစုမှာ
အလှအပနဲ့ မှိုတက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းပါး အတု တခုကို
မရမကတဲ့ အလိုရမက်တွေနဲ့ နမ်းသွားမိတာ
သူဟာလေ အချိန်အခါဆိုတာ မသိလို့
လူတကာတွေ ကျိန်စာကိုသာ မိသွားတာလည်း
မိုင်သောင်းချီဝေးတဲ့ အဆန်အဝေးက ခရီးကို
စတိုင်ဘောင်းဘီလေးနဲ့ အကြံကလေး ရအပြီး
အိုင်… ကောင်းပြီ… ဟေး… ဟဲ့…လို့… မာန်ကလေး ထပြီး
အနိုင် သောင်းချီပေးကွယ့်လို့ ဟန်ရေးပြပြီး
တကယ့် အဝေးကလမ်း အထိ မိုင်ရာတွေ ထောင်ချီ အရှိမှာ
ဘယ့်ပြေးရမှန်း မသိ ထိုင်ကာလေ ငေါင်နေမိတာ
သူ… တယောက်ထဲပါပဲ… …
အမြစ်တွေ ၀င်တွယ် ခိုလာ အသိ နှောင်းမှာ
အချစ် ရေပြင်ကျယ်ဆိုတာ ရှိကြောင်းဟာ
အပြစ်တွေ မစင်ကြယ်သလိုသာ ရှိကောင်းတာ
အချစ် ပင်လယ်ကို ရှာမတွေ့တဲ့ နှလုံးနဲ့
အပြစ် ရင်ဝယ်... အငို... လာဟေ့… ကွယ့်… အဆုံး...
အလစ် ၀င်တွယ်ခို... ငါ မမေ့တဲ့ အမုန်းနဲ့...
နှလုံး ကြေကွဲ ငိုက်ချထားရတဲ့ ဦးခေါင်းရဲ့
အရှုံးတွေပဲ ပိုက်ပြသွားရဖူးတဲ့ အကြောင်း
ကောင်းကောင်း မပြောပြလေတော့ဘူး… …
တရားနဲ့ အားတွေကို တိုက်စားခံနေရ
ဖိနပ်မဲ့ ခုခံစစ်ကြောင်း တနံတလျားတွေလေ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်က ကဗျာတပုဒ် ရွတ်ပြတယ်။
ဒီမှာလေ မွေးဖွားနေတဲ့ ခလေးတဦးဦး
”ပေါ်ဦးသက်” ၀င်စားလေမလား ။
(ကျောင်းသားတပ်မတော် ၂၁ နှစ်သားသို့ )